05/30/2017 - 14:29
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ကိုက နိုင်ငံတကာရေးရာများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များကို လာရောက်ဆွေးနွေး
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ကိုက (၃၀.၅.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ(၁)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-18) အပေါ်ထပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ နိုင်ငံတကာရေးရာများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များကို လာရောက်ဆွေးနွေးပါသည်။
04/26/2017 - 00:28
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. MR. PAUL R. SEGER ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Paul R. Seger နှင့် ပထမအတွင်းဝန် Mrs. Agnes Christeler Troesch တို့အား (၂၆-၄-၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် (J)ဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှု နှစ် (၆၀) ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။
ပြန်ကြားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မှု
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏စီစဉ်မှုဖြင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြန်ကြားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကို ၁၄.၃.၂၀၁၇ ရက်နေ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးချိန်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ထမင်းစားခန်းမဆောင်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် တက်ရောက်ပြီး အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်က ဆွေးနွေးတင်ပြကာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြန်လည် မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပ